Samsung Galaxy S21 wuxuu imaan karaa Janaayo 2021! | Androidsis
Samsung Galaxy S21 wuxuu imaan karaa Janaayo 2021!
Wax yar ayaa u hadhay calanka soo socda ee qoyska Samsung Galaxy S si uu iftiinka u arko. Sida iska cad, kahor imaatinka Daahfurka Samsung Galaxy S21 macluumaad kala duwan ayaa laga qariyey xarunta, sida kan naqshadeynta suurtagalka ah ee qalabkan.
Hadda, macluumaadka cusub ee la helay wuxuu sheeganayaa in shirkaddu ay keentay khadadka isku imaatinkeeda awood buuxda. Sababta? Waxay qorsheynayaan inay soo saaraan Samsung Galaxy S21 wax aad uga horreeya intaad moodeyso.
Galaxy S21 ayaa la soo bandhigi karaa bisha Janaayo
Taariikh ahaan, Samsung Galaxy S21 had iyo jeer waxaa lagu soo qaatay qaab dhismeedka MWC. Sidan oo kale, intii u dhaxaysay usbuucii ugu dambeeyay ee Febraayo iyo kowda Maarso, waxaan si faahfaahsan u arki karnay dhammaan sirta fardahooda dagaalka. Laakiin waxay umuuqataa in shirkada fadhigeedu yahay magaalada Seoul ay badashay maskaxdeeda waxayna sanadkaan dooneysaa inay iska hormarto iyada oo soo bandhigeysa taleefanka bisha Janaayo 2021.
Dabcan, marka soo saaraha dhererka Samsung uu bilaabo inuu soo saaro taleefan, wax badan buu muujinayaa. In ka badan wax kasta maxaa yeelay Samsung ma laha xulasho aan ka ahayn inay u wareejiso soo saaridda qayb ka mid ah qaybaha. Haa, shirkadda Aasiya waxay leedahay in ka badan muruq ku filan oo awood u leh inay soo saarto qaybaha ugu badan, laakiin waxay u baahan tahay inay hubiso inay haysato keyd ku filan oo ay awood ugu yeelan karto inay si ammaan ah taleefanka ugu iibiso.
Ka taxaddar, waxaan bilaabaynaa dawanno duulimaad ah, maadaama Samsung xilligan aysan bixin macluumaad ku saabsan taariikhda ay si rasmi ah u soo bandhigi doonaan Samsung Galaxy S21 Ultra (oo loo bixiyay SM-G998), Samsung Galaxy S21 Plus (oo wata SM-G996) iyo Samsung Galaxy S21 Lite (SM-G991).
Laakiin marka wabiga ka dhawaaqo qaybtan, waa tan biyaha qaada. Marka, waxay u badan tahay, soo saaruhu inuu runtii bilaabayo saddexdan terminaal, in kasta oo imaatinka S21 Lite weli aanu caddayn, aad uga horreeyay sidii aan filaynay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung Galaxy S21 wuxuu imaan karaa Janaayo 2021!
Sida loo dhaqaajiyo habka mugdiga ah ee ku jira barnaamijka Facebook
Rugcadaaga Galaxy S9 wuxuu helaa cusbooneysiin cusub oo firmware ah